03/06/2011 : Mila fifanampiana ny raharaha 07 Febroary
Raha nitafa tamin’ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna ny Filoha RAVALOMANANA dia nangataka izay manana porofo momba ny 07 Febroary rehetra hanome izany rehefa miasa ny vaomiera mahaleo tena. Ezaka lehibe hanamafisana ny fifandraisan-tanana izany amin’ny fahatratrarana ny tanjona nitolomana hatrizay. Ankoatr’izay dia nanantitra ny fahavononan’ny Ankolafy RAVALOMANANA sy ny Rodobe ny tenany amin’ny fiatrehana ny any Gaborone.
20/05/2011 : Speech by President Marc Ravalomanana to the SADC Extraordinary Summit on Madagascar
We all agree, the de facto regime took power in an unconstitutional manner. If we, as SADC, legitimize the de facto regime by endorsing the current Roadmap, we are setting a precedent for all SADC countries and for the continent of Africa. In effect we are stating that it is acceptable to come to power by means of a coup d’etat. ...
... Gentlemen, you hold the future of my country in your hands. It is time for you to be bold and choose an inclusive democratic solution for all. The world, the AU, southern Africa and especially Madagascar will be grateful.
SADC_Speech_by_the_President.pdf 285.78 Ko
07/05/2011 : Miantso amin’ny fanamafisana ny firaisan-kina ny Filoha RAVALOMANANA
Lahateny fohy nefa mafonja no nifandraisan’ny Filoha RAVALOMANANA Marc tamin’ireo mpiara-mitolona teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka. Niantso ny mpandala ny ara-dalàna rehetra ny tenany mba hiray hina hatrany mba hiavian’ny fandresena haingana. Maro ny zavatra mifamahofaho amin’izao fotoana izao mikasika indrindra ny eo amin’ny FATE sy ny fivoriana hatrehin’ny SADC atsy ho atsy. Ny fivezivezena rehetra izay ataon’ny FATE dia mandamoka avokoa saingy tsy lazaina amin’ny vahoaka Malagasy ny marina momba azy ireny.
Raha ny nambaran’ny Filoha RAVALOMANANA Marc dia tsy mbola mitsahatra mampahafantatra an’izao tontolo izao ny marina momba an’I Madagasikara ny tenany ary momba antsika avokoa ireny Firenena ireny. “Anjarantsika izany no mandray andraikitra mba tsy hiteraka fisalasalana eo amin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena” hoy ny Filoha RAVALOMANANA Marc .
30/04/2011 : « Mitaky fahamatorana ny fitarihana tolona » hoy ny Filoha RAVALOMANANA Marc
Hentitra tamin’ny fitondran-tenan’ireo mpitarika ny Filoha RAVALOMANANA Marc raha nandray fitenenana teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka. Tsy tokony hanala-baraka ny tolom-bahoaka ny mpitarika satria efa zary famantarana hoan’izao tontolo izao izy ireo raha vao nanomboka nandray anjara tamin’izany fitarihana tolona izany. Nalainy ohatra tamin’izany ny fahafaham-baraka nahazo ny filohan’ny kongresin’ny tetezamitan’ny FATE tany Namibia. Ankoatr’izay dia nanome toky an’ireo vahoaka mpiara-mitolona ny tenany fa « tsy misy mankato an-dRajoelina izany manerana ny tany ». Fihetsiketsehana fotsinyarak’izany ireny fivoahana an’i Madagasikara ireny fa tsy mahazo laka na aiza na aiza ny mpanongam-panjakana. Misy ny andraikitra miandry ny hery velona rehetra mitaky ny ara-dalàna amin’izao ankatoky ny fivoriam-ben’ny SADC izao. Tsy maintsy atao izay hisian’ny fifidianana ankatoavin’izao tontolo izao mba ahafahana mamaha haingana ny olana misy eto amintsika.
22/04/11 : Miantso ny FFKM sy ny CNOSC ny Filoha RAVALOMANANA
Nirary Paska ieren-doza hoan’ny mpiara-mitolona rehetra ny Filoha RAVALOMANANA androany. Andro farany ihaonana teny an-kianja manko ny Zoma Masina satria niezaka ny hanisy fitsaharana min’ny fetin’ny Paska ny mpitarika mba hitodihan’ny tsairairay amin’ny fianakaviana.
Tao anatin’ny hafatra napetraky ny Filoham-pirenena no niantsoany ny FFKM sy ny CNOSC hanampy amin’ny famahana ny olana eto Madagasikara. « Tsy tokony hisy hitazam-potsiny » hoy ny Filoham-pirenena « fa samy mandray ny andraikitra manoloana azy avy ». Nambarany fa Raiamandreny eo amin’ny Firenena ireo vondrona roa ireo ka afaka mijoro hanamora ny fanelanelanana hivoahana haingana amin’ny krizy. Nopotsirin’ny Filoha RAVALOMANANA Marc ihany koa ny lainga rehetra afafin’i TGV mikasika ny diany tany Afrika farany teo.
20/04/2011 : Filoha RAVALOMANANA : « voaporofo ankehitriny fa tsy isika no sakana »
02/04/2011 :Filoha RAVALOMANANA : « Zava-dehibe hoan’ny SADC ny famahana ny olan’i Madagasikara »
Nanome toky ny vahoaka mpitolona eo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny Filoha RAVALOMANANA androany. Nambarany fa tsy mbola mtsahatra nitady izay mahasoa ny mpiray tanindrazana ny tenany. « Efa manan-danja amin’ny tolona ny fampiantsoan’ny TROIKA fivoriam-be manokana eo amin’ny SADC handinihana ny momba antsika Malagasy » hoy ny Filoham-pirenena. Nazavainy fa izany fanapahan-kevitra izany dia midika fa zava-dehibe amin’ny SADC ny fahamana ny olan’i Madagasikara. « Hihaona amin’ireo Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana mpikambana ao amin’ny SADC aho hanazava ny zava-misy marina aty Madagasikara » io no dingana manaraka nambaran’ny Filoha RAVALOMANANA Marc fa tsy maintsy hataony mandrampiavian’ny fivoriam-be tsy ara-potoana momba an’i Madagasikara.
28/03/2011: Filoha Ravalomanana - « Ataovy amin'izay hanaovanareo vahoaka azy ireo mpamadika »
Mbola nanamafy ny maha sandoka an'io governemanta androany ny filoha Ravalomanana. « Tsy nanome alalana an 'iza na iza hiditra anatin'io governemanta io izany ny tenako.Izaho no chef de file ary tsy mbola nanome ny tso dranoko na ho an'ny ekipan' Raharinaivo, na ho an'ny ekipan'ny Yves Aimé Rakotoarison ». Hentitra ny filoha, « ataovy amin'izay hanaovanareo vahoaka azy ireo mpamadika ireo ». Raha ny nambarany dia tsy hahazo fankatoavana velively io governemanta io, na hisolo impiry aza. « Aiza koa praiministra mpomba an Rajoelina ihany no apetraka eo, dia lazaina fa iraisana, aoka tsy hofitahina ny vahoaka ». Farany dia toky no nomen'ny filoha ho an'ny vahoaka « Tsy hamadika ny vahoaka ny tenako. Tsy hanome alalana olona handeha hifaly, hameno paosy sy hiravaka voninahitra ary amin'ny governemanta tsy ara-dàlana ny tenako, nefa misy olona mpitarika mijaly migadra » hoy izy, nanipika manokana momba an'i Mamy Rakotoarivelo.
26/03/2011 : Filoha RAVALOMANANA :"governemanta unilatérale io nijoro io"
Manoloana ny fitsangana'ny governemanta vaovao an'ny HAT dia niditra mivantana tamina fahitalavitra tsy miankina iray ny FIloha RAVALOMANANA. Nambarany fa "mbola unilatérale io governemanta io ary tsy hahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena velively". Nanentana ny vahoaka Malagasy ny tenany tsy hiroaroa saina noho izany ary tokony hiatrika tsara ny fahatsiarovana ireo maherifon'ny firenena namoy ny ainy ho an'ny fahaleovan-tena. "Aoka ho fanehoam-piraisan-kina lehibe ny andron'ny 29 Martsa 2011" hoy ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA.
23/03/2011 : « Tsy misy fepetra intsony ny fahafahako mody » hoy ny Filoha RAVALOMANANA Marc
Efa nampitaina tamin’ny mpiara-mitolana omaly fa manana fanambarana lehibe hozaraina amin’izy ireo ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Telo sosona avy hatrany ny zava-dehibe nambarany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana raha nitafa an-telefonina tamin’ny mpitolona tonga maro teny an-toerana ny tenany. Voalohany dia nanmbaran’ny Filoham-pirenena fa hanova zava-dehibe eo amin’ny famahana ny krizy eto Madagasikara ny fivorian’ny TROIKA amin’ny faha-31 Martsa hoavy izao. Nazavainy fa efa nanao antso avo tamin’ny firenena Afrkana Tatsimo ny tenany mba hanampy amin’ny fivoahan’ny firenena amin’ny krizy ary dia nandefa iraka manokana avy hatrany ny fanjakana any an-toerana hijery ifotony ny tena olana. Faharoa dia nodisoan’ny Filoha RAVALOMANANA tanteraka ny filazana fa miantso an’ireo mpamadika isa-maraina ny tenany. “Tsy miresaka afa-tsy amin’ireo mpitarika mivory ao Bel’Air ny tenako” hoy izy “ka aoka hatsahatra avy hatrany izany fisandohana izany”. Fahatelo farany dia nambaran’ny Filoham-pirene Marc RAVALOMANANA fa tsy misy fepetra intsony ny ahafahany miverina an-tanindrazana avy hatrany.